RAW inoenderana inogadziridza yemadhijitari kamera | Ndinobva mac
Isu tinoenderera mberi nekuvandudzwa muOS X uye mune iyi kesi ndeye RAW inoenderana yekuvandudza yemadhijitari kamera, inosvika vhezheni 6.21 Mune iyi vhezheni nyowani, akati wandei edhijitari kamera mamodheru anowedzerwa nerutsigiro rwezvakatorwa zvakagadzirwa muRAW fomati. Mushure mekunge mwedzi yakati wandei yapfuura kubva pakagadziriswa kwekupedzisira mune makamera edhijitari ane rutsigiro rwefomati iyi akawedzerwa, isu tatova neshanduro 6.21 inowanikwa muMac App Store uye tinogona kutaura kuti ichi chichava chekupedzisira muOS X El Capitan kare kwasara mazuva mana kusvikira MacOS Sierra itsva yaburitswa.
Ino nguva iyo nyowani nyowani inongowedzera kuenderana kweFijifilm X - Pro2 uye Pentax K-1 kamera, saka hazvireve kuti iko shanduko yakanyanyisa. Ichokwadi ndechekuti runyorwa runyowani rwemakamera anoenderana rwakanyanya kuwanda, asi iwo magadzirirwo anowanzo kuuya mumadonhwe.
Kana iwe uine chero eaya emadhijitari kamera kamera uye iwe unoshandisa iyo RAW fomati kutora mapikicha ako uye wozoagadzirisa iwo paMac pasina kurasikirwa nehunhu hwakanaka iyo fomati iyi inotipa isu mumifananidzo, izvozvi zvave zvinoenderana neazvino OS X. Rangarira kuti Unogona kuwana iyo nyowani vhezheni yacho zvakananga kubva ku  menyu> App chitoro kana nekuiwana iyo zvakananga kubva kuMac App Store application> Dzidzo. Kana iwe uchida kuona kana kubvunza kune runyorwa rurefu rwemakamera anoenderana neiyi fomati, zviri nani kushanyira yako wega webhusaiti yeapuro kwaungawana runyorwa rwakakwana rwemakamera anoenderana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » OS X El Capitan » RAW inoenderana inoenderana yemadhijitari kamera